YuIP.org - Ona wako paruzhinji IP dzenyu dzakavanzika IP Online.
YuIP.org Shandisa YuIP Nzvimbo kuziva IP wako, kuti tione akazaruka zvengarava, uyewo edzai latency kune vakawanda servers munyika uye akapa paIndaneti ping murayiro.
Ratidza IP Your
IP Your paIndaneti
Your IP Local Network
IP Your paIndaneti, ndiri kureva wako paruzhinji IP kero, zvichireva kuti IP kero kuti ose Website iwe kuwana unogona kuona izvozvo. Kana uri kushandisa Marshal Server paruzhinji IP kunowirirana vateereri vako Marshal Server IP.
IP Your pamusoro Lan, ichi ndicho zvakafanana dzako dzakavanzika IP kero. IP ichi inowanika chete namano kuti chokuita menyu network. Kuona kwenyu IP kero iri Lan kuwana nzvimbo iri varumbidze uchishandisa Chrome Browser kana Firefox Browser nokuti haasi munhu wose anogona kuzviona.
Dzatumira IP rinoenderana imwe IP kero kuti ane chinangwa kuziva zano kuvhura paIndaneti kuburikidza HTTP Marshal Server. Zvinogoneka kuti yenyu Marshal Server iri configured kwete kuratidza IP wako dzatumira. Pane mamwe mamiriro ezvinhu kuti dzatumira IP ari kushandisa mutoro pakati nepakati.
ISP Your, munda uyu edza kuziva boka mutoro wako Indaneti.
Average latency, ndinoreva paavhareji nguva paIndaneti yako kutuma uye kugamuchira murayiro duku imwe Website. Izvi zvinoitika nguva dzose uye zvakare kana iwe kuwana Website. Saka mapfupi nguva, akasiya kutumira uye kugamuchira comandos.O Hurongwa achaedza kuti latency bvunzo pamwe internet yako uchishandisa pedyo AWS Server muchikwanisa.